मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति भन्छन्, ‘२० वर्षे रणनीतिक योजना बनाउने काममा तल्लीन छु’ |
अन्तवार्ता आइतबार, ३० फागुन, २०७२
देशकै कान्छो विश्वविद्यालय हो– मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय । पाँच वर्षअघि मात्र गठन भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्रा.डा. उपेन्द्रप्रसाद कोइराला पाँच महिनाअघि मात्र उपकुलपति नियुक्त भएका हुन् ।
२५ सय विद्यार्थी अध्ययरत यो विश्वविद्यालयममा पाँच वटा विभागहरु छन् । जसमा ह्युम्यानिटिज एण्ड सोसल साइन्स, ब्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधी र शिक्षाशास्त्र रहेका । अन्डर ग्राजुयट लेभलमा विश्वविद्यालयले २३ वटा कार्यक्रम चलाइरहेको छ भने ग्राजुयटमा १८ वटा कार्यक्रमहरु छन् । ११४ फुल टाइम टिचरहरु रहेको विश्वविद्यालयमा ४४ जना पार्टटाइम टिचरले काम गरिरहेका छन् ।
यसअअघिका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका उच्च अधिकारीहरु भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि डा. कोइरालाले यो विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । झण्डै चार दशक शिक्षा क्षेत्रमा बिताएका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कोइरालासँग एजुकेशन समाचारले वीरेन्द्रनगरस्थित उनकै कार्यकक्षमा गरेका कुराकानीः
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएर आउनुभएको ५ महिना भयो । केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
मूलत यो विश्वविद्यालय अहिले ५ वर्ष पुगेर छैटौं वर्षमा लाग्दैं गरेको बच्चा हो । यसले विश्वविद्यालयको स्वरुप प्राप्त गर्नका लागि जेजति यसका अंगहरु सशक्त र प्रबल हुनुपर्ने हो त्यो हुन बाँकी नै छ । त्यसो भएको हुनाले उपकुलपतिको हैशियतले मेरो मुख्य केन्द्रविन्दु भनेको यसलाई संस्थागत रुपमा विकास गर्नु हो । यसका लागि कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्नु जरुरी छ ।
त्यसका लागि कस्ता प्रयासहरु अगाडि बढिरहेका छन् ?
यो विश्वविद्यालयले मूलतः यो क्षेत्रका जनतालाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ । कुन कुन क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ र अनुसन्धान र अन्वेषणका कुन कुन क्षेत्रलाई यसले आफ्नो फोकस बनाउनुपर्छ भनेर यस विश्वविद्यालयको २० वर्षे रणनीतिक योजना बनाउने कुरामा तल्लीन छु अहिले । मैले देखेको छु, अनुभव गरेको छु । ३८ वर्ष सकिएर विश्वविद्यालयको पेशामा लागेको ३९ वर्ष हुँदैंछ । अरु विश्वविद्यालयको हेर्छु, एउटा भिसी आउँछ आलु खेती गर्छु भन्छ, अर्को आउँछ सुन्तला खेती गर्छु भन्छ, अर्को आउँछ खुर्सानी खेती गर्छु भन्छ । कुनै पनि पनि खेती हुँदैंन । विश्वविद्यालयको साधन स्रोत बर्बाद हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले यस विश्वविद्यालयको २० वर्षे रणनीति योजनामा लागेको छु । यसलाई २० वर्षमा कहाँ पुर्याउने हो । त्यो पुर्याउने सवालमा यहाँका जनता, विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, राजनीतिक पार्टीका ब्यक्तित्वहरु, उधोगपति, ब्यापारी समाजसेवी र यो क्षेत्रका सरोकारवालाहरु जस्तै जाजरकोट, दैलेख, बाँके, बर्दिया यी जिल्लाहरुमा पनि गएर हामीले सेमिनार गरेर विचारहरु ल्याएका छौं । त्यसका आधारमा २० वर्षमा यो कहाँ पुग्ने हो र त्यहाँ पुग्नका लागि कुन कुन खुडकिलाहरु चढ्नुपर्ने हो । त्यो खुडकिला भनेको एक्सन प्लान हो । अहिले पाँच वर्षे एक्सन प्लान र २० वर्षे स्टाटेजीक प्लान निर्माणमै हामी केन्द्रीत छौं ।
यो कहिलेसम्म निर्माण भइसक्छ ?
यो बढीमा एक महिनाभित्रमा सकिन्छ । म अहिले यसैमा लागिरहेको छु । जुन २०१६ देखि २०३५ सम्मको हुनेछ । म भिसी भएर आइसकेपछि पहिलो निर्णय नै यो विश्वविद्यालय योजनाबिहीन रुपमा चल्नु हुँदैन भन्ने थियो । योजना बनाउने त्यो योजनाका आधारमा यो विश्वविद्यालयले कुन कुन शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने हो । जुन पायो त्यही होइन । कुन क्षेत्रलाई फोकस गर्ने हो । पूर्वाधार विकास कसरी गर्ने, विश्वविद्यालयलाई नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरुभन्दा पृथक पहिचान कसरी दिने र यो विश्वविद्यालयले अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा कसरी संसारका अन्य विश्वविद्यालयसम्म सम्बन्ध स्थापना गर्ने भन्ने कुरा यो योजनामा राख्छौं ।
यो योजना नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपतिबाट विमोचन हुन्छ ।
विश्वविद्यालयमा पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले नेपालकै सबैभन्दा गरिब विश्वविद्यालय हो । जसको कुनै आफ्नो भवन छैन । यी सबै भवनहरु भाडामा छन् । जहाँ हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरु चलेका छन् ती भवन पनि अर्को कलेजबाट समायोजित हुँदा आएका हुन । यसको आफ्नै भवन छैन । त्यसैले अहिले हामीले यो रणनीतिक योजनाका अतिरिक्त एकडेमिक प्रोग्रामलाई कसरी ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, सोसाइटीलाई कसरी ओनरसीप फिल गराउने र हाम्रा भौतिक संरचनालाई कसरी विकास गर्ने हो भन्ने विषयमा पनि काम गरिरहेका छौं । मैले विश्वविद्यालयको मूल भवन बनाउनका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपतिज्यूलाई प्रस्ताव पेश गरेको छु । उहाँले हेर्नुभएको छ र कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ । यो विश्वविद्यालयमा केही रहेनछ भनेर उहाँलाई थाहा पाउनुभएको छ, उहाँले आश्वासन पनि दिनुभएको छ । शिलान्यास गर्न आउछु भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट के अपेक्षा राख्नुभएको छ अरु ?
प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्न आउदा विश्वविद्यालयले ४ ५ करोड पाउँछ । यसैगरी त्यति नै बेला हामी रणनीतिक योजना विमोचन गराउँछौं । त्यो प्रधानमन्त्रीले विमोचन गर्नु भनेको राज्यले स्वामित्व लिनु हो ।
भनेपछि विश्वविद्यालयलाई कस्तो बनाउने भन्ने खाका बनाइरहनु भएको छ ?
अवश्य पनि । यो ६ नम्बर प्रदेश भनेको नेपालको सबैभन्दा गरिबी प्रदेश हो । आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक रुपमा सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो । तर, स्रोतका आधारमा नेपालको सबैभन्दा धनी प्रदेश हो । मैले यहाँका विभिन्न कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु, विकासको प्रमुख आधार शिक्षा हो । यहाँबाट सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर सडकमा भिख माग्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न चाहन्न । बरु, त्यस्ता कार्यक्रमहरु नै चलाउँदैंनौं । यहाँको आवश्यकता हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ, जडीबुटी प्रशोधन एजुकेशन, पशु विकास, लाइफ साइन्सजस्ता विषय हुन् । यी मैले चार वर्षमा गर्ने होइन । त्यसका लागि खाका बनाउने हो । यो खाका कार्यन्वयनमा ल्याउन सकियो भने आजको १० वर्षपछि मानिसले त्यसको अनुभव गर्नेछ ।
भनेपछि फरक खालको शिक्षाको पक्षमा हुनुहुन्छ ?
अब कर्मकाण्डी शिक्षाको काम छैन । एजुकेशन क्रियटिङ स्केलमा फोकस हुनुपर्छ । सीप विकास गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ । यहाँका मान्छेको नेपालका मानिसहरुको प्रतिब्यक्ति आयको आधा आय छ । पहिले विद्यार्थीहरु यहाँ पढ्दैन्थे । सबै बाहिर जान्थे । म आएको पाँच महिना भयो । विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विद्यार्थीले बुझ्या छ, भिसीले साँच्चै एजुकेशन दिने अभियान हिडेको छ भनेर ।
पाँच महिना तपाईं बस्नुभयो । विगत ५ वर्षमा के काम भएको पाउनुभयो ?
विगत ५ वर्षमा यसको दर्दनाक अवस्था हो । उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनहरु सबैलाई भ्रष्टाचारको मुद्धा लाग्यो । २१ महिना विश्वविद्यालय नेतृत्वबिहीन भयो । अर्कोतर्फ यहाँ ५÷६ वटा भिसी भए । भिसी आफै भिसी, रजिष्ट्रार पनि भिसी, डिन पनि भिसी सबै भिसी । एउटाले भनेको अर्कोले नटेर्ने अवस्था आयो । अब रुल अफ ल मा हिड्ने हो, चेन अफ कमाण्डमा हिड्ने हो । यो विश्वविद्यालय डुब्यो भने माओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई दोष दिदैंनन् उपेन्द्र कोइरालालाई दोष दिन्छन् । मैले त्यो बुझ्या छु । त्यसैले कुनै पार्टीले यो गर म गर्दिन्, कुनै पार्टीले यो नगर भनेपनि ठीक छ भने म त्यो गर्छु । किनभने, दोष मैले बोक्नुपर्छ भने जस पनि त मैले बोक्नुपर्यो । हाम्रो देशमा अहिले शिक्षामा जुन राजनीतिक प्रदुषणको अवस्था छ त्यो प्रदुषणको अवस्था हटाउन कसै न कसैले त सुरु गर्नुपर्यो । मैले सुरु गर्ने कोशिश गर्या छु ।
तपाईहरुको विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी त भइरहेकै छ ?
म आउनुभन्दा पहिले १८ कि १९ वटा ताला लाग्याथ्यो रे यहाँ । पहिलेको उपकुलपति हुँदा । पछि एक एक गरेर खोले । त्यसपछि एक पटक ताला लागेको छ । मेरो आफ्नै सिद्धान्त छ । म कसैले लगाएको ताला फोर्दिन । ताला फोर्न त चोरको काम हो । म के चाहन्छु भने जसले ताला लगाएको हो उसैले खोल्नुपर्छ । म जहाँ भएपनि भिसी चलाउँछु, अफिसमा चलाउँछु, कोठामा चलाउँछु, चलाउनु न पर्यो नि । अनि देख्छ कि त यसैलाई मार्नुपर्यो नत्र यो तालाको कामै रहेनछ । पाठ सिकाउन जरुरी छ । र, अर्कोतिर विद्यार्थी, कर्मचारीको जायज माग छ भने म त्यसलाई गम्भीर रुपमा आत्मसात गर्छु, कार्यन्वयन गर्छु । उपकुलपतिले कुन ठीक हो कुन बेठीक हो छुट्याउनुपर्छ । रणनीति योजना निर्माणमा पनि हामीले सबै पार्टीलाई समेटेका छौं । उहाँहरुका सुझावहरुलाई राख्छौं । को आएर सुझाव दिनुहुन्छ हुन्न त्यो उहाँको कुरा हो । पोलिटिकल पार्टीहरुले प्रभावमा पार्न खोज्छन्, स्वभाविक हो तर यो विश्वविद्यालय चलाउने मान्छेले सबैलाई समान दूरीमा राख्नुपर्छ ।
विदेशका विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न विद्यार्थी काउन्सिलका अवधारणाहरु अगाडि ल्याइएका छन् । यो उपयुक्त अवधारणा हुन सक्छ ?
विद्यार्थीहरु पनि विश्वविद्यालय राम्रो बनोस भन्ने चाहन्छन् । किनभने, यहाँका मान्छेले आधा पेट खाएर यो विश्वविद्यालय बनाएका छन् । तर, यसलाई संस्थागत बनाएर लैजान समय लाग्छ ।
प्राध्यापकहरुको टोली कस्तो छ ?
अति सिनियर प्रोफेसरहरु यहाँ आउन चाहदैंनन् । दुर्गम ठाउँ भन्छन् । उनीहरु काठमाडौंमा रमाउन चाहन्छन्, विदेश जान चाहन्छन् । तर, यहाँ आउन चाहदैनन् । त्यसका बाबजुद पनि सक्षम र बरिष्ठ ब्यक्तिहरुलाई बोलाएको छु । जस्तै एमबीए कार्यक्रमका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेण्टका सिनियर रिडरलाई ल्याएको छु । उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ । अरु तिर पनि ल्याउने काम गरिरहेका छौं । यहाँ अन्य उपलब्ध प्रोफेसरहरु पनि युवा भएपनि सक्षम छन् । थप सिनियर प्रोफेसरहरु ल्याउने कुरा पनि अगाडि बढाइरहेका छौं ।
विदेशी विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्ध कसरी विकास गरिरहनुभएको छ ?
साउथ एसियन युनिभर्सिटी, चन्डीगढ युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडासँग सम्बन्धहरु अगाडि बढेका छन् । चिनियाँ राजदूतलाई पनि सहकार्यका लागि पत्र लेखिरहेका छौं । त्यसैले होला वेव ¥याङकिङमा पनि नेपालको विश्वविद्यालयहरुमा ४ नम्बरमा पुगेका छौं । चौथोमा आएकोमा खुशी होइन चुनौती थपिएको छ । भिसी भएर आउँदा केही गर्न नसकेपनि ¥याङकिङ सुधारेर पाँच पु¥याउँछु भनेको थिए, तर अहिले नै चौथोमा पुगिसकेका छौं । यसले बढी जिम्मेवारी थपिएको छ । अहिले हामी ट्रयाकमा हिडिरहेका छौं जस्तो लागिरहेको छ । कायापलट गरेर भएको होइन ।
नयाँ भिजन अगाडि बढाइरहनुभएको छ । चुनौतीहरु के के छन् ?
जीवन भनेकै संघर्ष हो । यो मेरो विश्वविद्यालय हो भनेर ओनरसीप फिल गराउनुपर्नेछ । अहिले पनि यहाँका ठूलाबडाका छोराछोरीहरु यो विश्वविद्यालयमा आउँदैनन् बाहिर जान्छन् । जब युनिभर्सिटी कटेर मान्छेहरु गइरहेको देख्छु, मेरो भित्री मनलाई घोच्छ । किन यी विद्यार्थी गए, किन बसेनन् ? ठूलो चुनौती उनीहरुलाई कसरी यहाँ फर्काउन । त्यसका लागि क्वालिटी एजुकेशन दिने हो । क्वालिटी एजुकेशन भन्ने बितिकै क्वालिटी टिचर चाहियो । क्वालिटी टिचर भन्ने बितिकै क्वालिटी ट्रेनिक चाहियो, क्यारियर डेभलपमेण्ट गर्नुप¥यो । हाम्रो भौतिक संरचना पनि जिरो लेभलमा छ । शुन्य तहबाट काम गर्दैछौं । उपकुलपति कार्यलय, डिन कार्यलय, परिक्षा नियन्त्रण कार्यलय सबै भाडामा छन् ।
तेस्रो चुनौती भनेको हाम्रा स्रोतहरुलाई अधिकभन्दा अधिक प्रयोग गर्नका लागि हामी विशेषज्ञ र दक्ष म्यानपावरको अभाव छ । हिजोमात्र युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडाको प्रोफेसरसँग कुरा भयो देआर रेडी । उनीहरु ३ मिलियन डलर इन्भेष्ट गर्न तयार छन् । उनीहरु एक्पोर्ट, काम गर्ने आधारहरु सबै खोजे । हामीसँग दक्ष र विशेषज्ञहरुको अभाव छ । म प्रयास गरिरहेको छु । अर्को चुनौती भनेको साधन स्रोतको पनि कमी छ । जनताहरु लागि परेका छन् । उनीहरु जग्गा दिन तयार छन् । त्यसमा मेडिकल कलेज बनाउने मेरो सपना छ । त्यसका लागि त पैसा चाहिन्छ । पैसा कसरी ल्याउने ? पब्लिक, प्राइभेट अनरसीपमा जाने । अहिले मैले चिनियाँहरुसँग पनि मेडिकल कलेजका विषयमा कुरा गरिरहेको छु । हाइड्रो पावरको विषयमा कोरियन इन्च्युष्ट फर टेक्नोलोजीसँग कुरा भइरहेको छ । उनीहरुले मलाई बोलाइरहेका छन् ।
तर, रिसोर्स र म्यानपावरको कमी भन्दै म थाकेर बस्ने ब्यक्ति होइन । यहीभित्र बसेर के गर्न सकिन्छ म प्रयास गरिरहेको छु ।